Akpụkpọ ụkwụ mmiri na-ehichapụ
Kedu otu esi ahọrọ nhichapụ ụmụaka?
Na usoro 4 dị mfe, kuziere gị ịhọrọ ebe nchekwa dị mma! 1: Lee ihe ndi eji eme ya na ihe ndi ozo. Ndị nne na nna ga-azụta nhichapụ mmiri mmiri site na ọwa mmiri mgbe niile, ha ga-elekwa anya nke ọma na ha mgbe ị na-ahọrọ: Maka ihe ndị na-emepụta ngwaahịa, ọ kachasị mma ịhọrọ ngwaahịa akpọrọ nke ọma dịka ọ bụghị ...
Adịla ahọrọ nhichapụ na-adịghị mma nke nwa gị na-eji kwa ụbọchị!
Mgbe ị mụsịrị nwa, nhicha mmiri aghọwo ihe dị mkpa maka ezinụlọ. Karịsịa mgbe ị kpọpụtara nwa gị, ọ dị mma iburu, ị nwere ike ihichapụ ịnyịnya ibu gị mgbe nsị gị na nsị, ị nwere ike ihichapụ aka nwa gị ma ọ bụrụ na ha ruru unyi, ị ga-atụfu ha mgbe ha ruru unyi, elimina .. .
Umuaka mmiri na-ehichapụ nyocha: mmiri a na-ehichapụ aghọwo nsị na-egbu egbu
Dika ibi ndu nke di nma karie nke oma, echiche ndi mmadu banyere nlezianya nke umuaka na-agbanwe nke oma, karia ndi na-eto eto amuru na 80s na 90s ndi aghaghi itinyekwu uche na uto nke ndu. N'anya ndị nne na nna na-eto eto, omume nke ọgbọ ochie na-ehichapụ ev ...
Ezigbo ihe ｜ Nhicha nhicha pụrụ iche maka jaketị ala, dị nwayọ ma ghara imebi aka.
Maka na ndị mmadụ na-atụ egwu nsị, ọ bụ na mmadụ niile anaghị anwa anwa zụta uwe na-acha ọkụ, ọkachasị ndị ọcha dị ọcha? Akara uwe ndị ahụ dị oji na odo, na-amaghị ama welie aka wee hụ na ọ na-ele ya anya na-asọ oyi! Mgbe ị na-agbanwe akwa, eyi ...
Wet wipes mere nke 100% owu bụ enyi na enyi na adụ, kwesịrị nke na-akparaghị ókè ịgbara
M na-eji nhichapụ mmiri kwa ụbọchị, mana enweghi ihe abụọ na-eme m obi ụtọ. Imirikiti n'ime ha dị ka ndị na-agafe agafe - enweghị echiche ịdị adị. Ihe nhicha ihu 100% na-ehichapụ mgbochi mmiri m ji mee ihe na nso nso a nyere m echiche nke ihe ijuanya ịchọta ihe ọma. Moisturizing, enyi na enyi, na ...
Mmanya disinfectant na-ehichapụ, nsị dị ike na-enweghị mgbakasị, ma gbochie nje.
Academician Li Lanjuan, onye otu elu-larịị ọkachamara otu nke National Health Commission, n'ihu ọha enen ke pịa ogbako: “Ọhụrụ coronavirus egwu mmanya na-adịghị eguzogide ọgwụ dị elu okpomọkụ. Dabere na ahụmịhe gara aga na coronaviruses, ether, 75 ...
Etu ị ga - esi họta ezigbo nwa ehichapụ maka nwa gị？
E nwere ike ikwu na ehichapụ ụmụaka nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ịla njem n’ụlọ. Ikwesiri igbanyere akwa nwa gi ma hichaa aka gi na onu. Agbanyeghị na a na-ahụta nhicha ụmụaka dị ka "ndị na-eri ngwaahịa", a na-ejikarị ha eme ihe maka nhicha, mana ọ bụrụ na ịchọrọ iji nlezianya họrọ ha, enwere st ...
Ihicha ntutu ntutu isi na-ehichapụ
Na Disemba 2020, KWES launchedR launched mepụtara ntutu ọhụrụ na nhicha ntutu. Ọ bụ nhichapụ nke na-abụghị ọgwụ na-ekpochapụ. Ihicha mmiri ahụ nwere ihe ndị dị mkpa maka ntutu isi, zuru ezu iji mee ka ntutu gị na-enwu gbaa maka otu ụbọchị, ma wepụ ihe mkpofu na mmanụ na-enweghị isi n'isi. ...
Ezinụlọ na-ehicha anụ ụlọ na-ehicha mma
AKW hasKWỌ ahapụla ọhụụ ọhụrụ ezinụlọ na-ehichapụ. Ogo nke akwa akwụkwọ ahụ zuru oke. A na-eji ihe okike emee mmiri a. Ọ bụ enyi na enyi, mma na-adịghị njọ na anu ulo. Nkịta kachasị mma na-ehichapụ maka anya bụ nkịta ...
Ọrịa ahụ ka na-aga n'ihu. Nke a bụ agha nke onye ọ bụla na-ekere ma onweghị egbe egbe. Na mgbakwunye na ịkwado akara n'ihu dịka ha nwere ike, ndị nkịtị kwesịrị ichebe onwe ha ma zere ọrịa, gbochie oria a na-eme ...
Emebere mmemme ịzụ ahịa Lazada 9.9 a na-eme kwa afọ na mba isii Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N'adịghị ka afọ ndị gara aga, Lazada kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ahịa ọkaibe LazMall, n'oge ememme ịzụ ahịa 9.9 n'afọ a. Nyere udiri aka, ndi n’ahia ahia na ikesa ikike ...
Na 2020, ụwa abanyela ọgụ buru ibu megide COVID-19. Agha a dị ogologo karịa ka a tụrụ anya ya. N’ọnwa Ọktọba, BETTER bidoro disinfection ọhụrụ na hichapụ antibacterial. Nke a F&U disposable disinfectant na-ehichapụ nwere onyinye okpukpu abụọ nke nwere quaternary ammonium s ...
Adịghị ahọrọ nhichapụ na-ezighi ezi nke ba gị ...
Umuaka umuaka na-ehichapụ nyocha: mmiri a ...
Ezi ihe ｜ Special ihicha ekpochapụ maka d ...
Wet wipes mere nke 100% owu bụ skin-fr ...